कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा दन्त उपचार सेवा सुरु « Janata Times
कालीकोट, ५ मंसिर । कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा दन्त उपचार सेवा सुरु भएको छ । बहिरङ्ग सेवासँगै अस्पतालले दन्त उपचार सेवा पनि थप गरेको हो । जिल्ला अस्पतालमा दन्त उपचार सेवा सुरु भएपछि सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ । पहिला दन्त उपचार सेवा सुरु नहुँदा बिरामीले जानकारी नपाएका कारण छिटपुट मात्र दाँतका बिरामी आउने गरेकामा अहिले दैनिक १५ जनाका दरले दन्त उपचार सेवा लिन आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ ।
दाँतका बिरामीले दैनिक सेवा लिनेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको दन्त सेवा विभागका प्रमुख डा. रोहित गुरुङले बताउनुभयो । ‘आगामी दिनमा थप एक चिकित्सक आवश्यक रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ ।’ अस्पतालले दन्त उपचार सेवा दिन सुरु गरेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका निमित्त व्यवस्थापक डा. रत्नवीर सुनारले बताउनुभयो ।
‘अस्पतालमा दाँतको सेवा लिनेको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन वृद्धि भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अस्पतालमा हाल दाँत निकाल्ने, भर्ने, आरसिटी गर्ने, सफा गर्नेजस्ता उपचार सेवा दिइएको छ । आगामी दिनमा दाँत फेर्ने सेवा पनि सञ्चालन गर्ने डा. सुनारले बताउनुभयो । कालीकोटमा दन्त उपचार सेवा नहुँदा दाँतका बिरामीले उपचारका लागि सुर्खेत नेपालगञ्जलगायत सुविधा सम्पन्न सहरमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको खाँडाचक्र नगरपालिका–२ का बिर्ख विकले बताउनुभयो ।
सुर्खेत, १६ मंसिर । नेपाली कांग्रेसको सुर्खेतमा सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन वरिष्ठ नेता
चितवन, १६ मंसिर । दुर्घटनाका घाइते उपचारका लागि भरतपुर अस्पतालले ‘ट्रमा इमरजेन्सी सेवा’ सुरुआत गरेको
२२ मुलुकमा फैलियो कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन
काठमाडौं, मंसिर १६ । नाइजेरिया र साउदी अरबमा पनि कोभिड १९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’